Mananjary V7V Tafajoro ny K25
Tafajoro tamin’ny alarobia 21 novambra 2018 ny K25 ao Mananjary izay ivondronan'ny herivelona rehetra ao amin’ity distrika ity ka Atoa Sambizafy Jean Laurent (Maire Nana) sy Rtoa Fafony Anatolie no mitarika azy.
Tontosa taorian’ny nandalovan’ny kandida n°25 tany Mananjary ny talata 20 novambra 2018 ny hetsyka nisaotra ny vahoaka tonga mavitrika niatrika ny fifidianana tamin’ny 7 novambra teo sy nitarika lahadinika niarahana tamin’ireo mpandraharaha any an-toerana sy ireo fikambanana maro samihafa sy ireo mpandrindra teknika rehetra any an-toerana ihany koa. Nambaran’ny kandida n°25 fa hajoro manerana ny nosy ny K25 Komity Hampandresy ny Kandida 25 amin’ny fihodinana faharoa satria betsaka ireo olona te hanatevin-daharana ka hanohana amin’ny fomba rehetra hibatana ny fandresena mazava. Lasa isika ary tsy mihemotra intsony fa tena azontsika io, hoy i Marc Ravalomanana. Marihina fa nitarika ny fandrindrana an’ireo hetsika natao tany Mananajary rehetra ireo Atoa Andriamanampisoa Gégé Bernard “Gégé Bosco” filohan’ny fikambanana Vary sy Rano any an-toerana.